ဘာ့ကြောင့် ကလေးဝမ်းအရောင် စိမ်းရတာလဲ – Daily Feed MM
Editor_Sat | January 11, 2022 | Healthy, Knowledge | No Comments
ကလေးတွေမှာ အထူးသဖြင့် လသားကလေးငယ်တွေဟာ ဝမ်းသွားချိန်မမှန်ပါဘူး။ တစ်ရက်တစ်ခါသွားတဲ့ရက်တွေရှိသလို သုံးလေးရက်မသွားဘဲနေပြီးမှ အများကြီးပြန်သွားတဲ့အခါလည်းရှိပါတယ်။ ဒါဟာပုံမှန်ဖြစ်နေကျဖြစ်ပြီး စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး။ သည်လိုပါပဲဝမ်းအရောင်ဟာလည်းမမှန်တတ်ပါဘူး။ရက်အများစုမှာအဝါပဲသွားပေမယ့်တချို့ရက်မှာအရောင်ဖျော့မယ်၊ ဝမ်းချုပ်ပြီးပြန်သွားတဲ့ရက်မှာ အနီရောင်အမျှင်လေးတွေပါမယ်၊ အဲ အချို့ရက်တွေမှာဆို အစိမ်းရောင်ဝမ်းတွေသွားတဲ့ရက်တွေလည်း ရှိမှာပါပဲ။ မိဘတွေအနေနဲ့လည်း ကလေးဇောနဲ့ဆိုတော့ မကြုံဖူးသေးတဲ့အခါစိတ်ပူတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဝမ်းစိမ်းရင် ဘယ်အခါကျစိတ်ပူစရာမလိုဘူး၊ ဘယ်အခါကျစိတ်ပူရတယ်ဆိုတာကို ဆရာပြောပြမယ်နော်။
၁. ကလေးရဲ့အစားအသောက်ထဲမှာ အစိမ်းရောင်ရှိတဲ့အရွက်တွေပါတာ၊ ပဲသီးစိမ်းပါတာ၊ သံဓာတ်ကြွယ်တဲ့အစားအစာတွေပါတဲ့အခါမှာ ဝမ်းအစိမ်းရောင်သွားတတ်ပါတယ်။ အစိမ်းရောင် အစားအစာဆိုးဆေးပါတဲ့ရယ်ဒီမိတ်အစားအသောက်တွေ၊ အစိမ်းရောင်ရှိတဲ့အသီးအနှံတွေစားရင်လည်း ဝမ်းအစိမ်းရောင် သွားတတ်ပါတယ်။
၂. မိခင်နို့တိုက်တဲ့ကလေးတွေမှာ မိခင်အစားအသောက်မှာအစိမ်းရောင်ရှိသောအသီးအရွက်များများပါရင်လည်းကလေးဝမ်းစိမ်းတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာစိတ်ပူစရာမဟုတ်တဲ့အတွက် မိခင်အနေနဲ့အစားရှောင်စရာမလိုဘဲ ပုံမှန်အတိုင်းဆက်စားနိုင်ပါတယ်။
၃. ဖော်မြူလာနို့မှုန့်တိုက်တဲ့ကလေးတွေမှာလည်း မိခင်နို့တိုက်တဲ့ကလေးတွေထက်စာရင် ဝမ်းအစိမ်းရောင်ပိုသွားနိုင်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ဝမ်းအစိမ်းရောင်သွားတာဆိုရင် စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။ ဒါဟာ သဘာဝဖြစ်စဥ်အလျောက်သွားတဲ့ ဝမ်းအစိမ်းမို့ ကလေးလန်းတယ်ဆိုရင် စိတ်ချလို့ရပါတယ်။ ဆေးတိုက်စရာမလိုပါဘူး။
၄. ကလေးကဝမ်းတွေအရမ်းလျှောပြီး တအားအများကြီးသွားထားတယ်ဆိုရင် အူထဲမှာဝမ်းကျန်နည်းပြီး အရည်များများသွားတဲ့အခါ သည်းခြေရည်တွေပါဝမ်းထဲပါလာတတ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်လည်းဝမ်းစိမ်းတတ်ပါတယ်။
၅. ဝမ်းရောဂါပိုးအချို့ဟာလည်း ဝမ်းအစိမ်းရောင်ကိုသွားစေပါတယ်။ ဂျီယားဒီးယား ကပ်ပါးပိုး (Giardia Lumblia) နဲ့ ဆယ်လ်မွန်နဲလားပိုးအချို့ (Salmonella) ကြောင့် ဝမ်းရောဂါဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်း ဝမ်းလျှောဝမ်းပျက်ခြင်းနဲ့အတူ ဝမ်းအစိမ်းရောင်သွားတတ်ပါတယ်။
ဆိုတော့ ဆရာအချုပ်အနေနဲ့ပြောရရင် ဝမ်းအစိမ်းရောင်သွားတာအများစုဟာ စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ သဘာဝဖြစ်စဥ်ပါပဲ။ ကလေးလန်းရင်စိတ်မပူပါနဲ့။
အကယ်၍ ဝမ်းကလည်းစိမ်းတယ်။ ကလေးကလည်း မလန်းဘူး၊ ဝမ်းတွေလည်းလျှောနေတယ်ဆိုရင်တော့ နီးစပ်ရာကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းကိုပြပြီးကုသစေချင်ပါတယ်။
သိန်း ၁၀၀ တန်ကားဝယ်ပြီး အမည်ပြောင်းရင် အခွန် (15)သိန်း သက်သာစေတဲ့ နည်း
ကိုယ့်ကလေးကိုချစ်ရင် ဟာလဝါ၊ထိုးမုန့် လုံးဝ(လုံးဝ) မကျွေးကြပါနဲ့
နို့ကင်ဆာ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ အူမကြီးကင်ဆာ အတွက် ပူစရာမလိုတော့ပါ